Oromiyaatti barana dargaggoonni miliyoona afur hojii tola ooltummaa irratti kan hirmaatan ta'uun ibsame
Oromiyaatti barana dargaggoonni miliyoona afur hojii tola ooltummaa irratti kan hirmaatan ta'uun ibsame Featured
Biqiltuu dhaabuun hojii tola oltummaan raawwatamu keessaa tokko
Oromiyaatti hojiin tola oltummaa ganna baranaa kaleessa eegalamuusaa Biiroon Dhimma Dargaggootaafi Ispoortii Oromiyaa beeksise.
Biirichatti, Daarektarri Sosochii Hirmaannaafi Idileeffannaa Dargaggootaa Obbo Abraam Yitibaarak ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, akka Oromiyaatti hojiin tola uultummaa ganna baranaa kaleessa biqiltuu dhaabuufi dhiiga arjoomuun Godina Jimmaa, Aanaa Qarsaatti ifatti eegalameera.
Hojii tola ooltummaa baranaarratti dargaggoonni miliyoona afur akaakuu hojii ijoo 15 irratti bobba'uudhaan hawaasa miliyoona 15 fayyadamoo ni taasisu kan jedhan Obbo Abrahaam, hojiin kun maallaqa mootummaa miliyoona 100 ol baasiirraa kan baraaru ta'uus himaniiru.
Dargaggoonni fedhiifi ogummaa qabanii hojii tola ooltummaa kana irratti kan hirmaaatan ta'a kan jedhan daarektarichi, dargaggoonniifi qeerroon warraaqsa mirga ummata kabachiisuuf taasisaniin ijifannoo galmeessisan hojii misooma hawaasaa kana irrattis injifannoowwan caalaa galmeessisuuf tumsa barbaachisu akka taasisaniif dhaamaniiru.
Barumsa titooriyaalii kennuun, mana maanguddoota nama isaan gargaaru hinqabnee suphuun, namoota 'HIV/ Eedsii' waliin jiraatan kunuunsuu, dhiiga arjoomuufi kunuunsi qabeenya uumamaa hojiilee ijoo bara darbe bal'inaan raawwataman ta'uu Obbo Abrahaam himaniiru.
Torban kana/This_Week 4895
Guyyaa mara/All_Days 1642490